အပျိုမစစ်လို့ဆိုပြီး မင်္ဂလာဦးညမှာပင် သတို့သားအသစ်စက်စက်ရဲ့ ကွာရှင်းခြင်းခံခဲ့ရသူ – Myanmar Magazine
တင်ပါးနည်းနည်း အောင့်နေလို့ အွန်လိုင်းပေါ်က နတ်သားလေးဆိုတဲ့ အနှိပ်သည်ခေါ်နှိပ်လိုက်မိသူရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုး (ရုပ်သံ)
ယောက်ျားဖြစ်သူထံ ပို့တဲ့ အိပ်ယာထဲက အလွမ်းဖျောက် အာသာပြေ ဗီဒီယိုကို လူ၂၀၀၀ကျော် မြင်သွားလို့ အရှက်တကွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး. . .
ဘူးသီးတောင်မြို့ ပစ်ခတ်မှုအတွင်း ဗုံးခိုကျင်းတွင် ပုန်းအောင်းနေသူ ကျေးရွာသား ၆ ဦးသေဆုံး
ကေတီဗီ က ထွက်ပြေးလာတဲ့ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်
အပျိုမစစ်လို့ဆိုပြီး မင်္ဂလာဦးညမှာပင် သတို့သားအသစ်စက်စက်ရဲ့ ကွာရှင်းခြင်းခံခဲ့ရသူ
December 5, 2018 myanmarmagazine	နိုင်ငံတကာသတင်း
အပျိုစစ်ခြင်းမစစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေအချင်းချင်းတောင် သဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့ ကိစ္စမျိုးပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အပျိုစစ်ခြင်း မစစ်ခြင်းဆိုသည်ကို အလွယ်ပြောဖို့အတွက် တစ်ပါးသောယောက်ျားနဲ့ နှီးနောပတ်သက်မှုမရှိဖူးသူဆိုရင်တော့ အဲဒီအမျိုးသမီး အပျိုစစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
Virgin ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာမှာတော့ A person who has never had sexual intercourse. ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ရာ ဒါဟာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ sexual intercourse ဆိုသည်မှာ အဖော်မပါဘဲ တစ်ကိုယ်တည်း ပြုလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေလို့၊ ဘာသာဘာဝ တစ်ဦးတည်း အာသာဖြေတတ်သူတွေအနေနဲ့ Virgin ဆိုတဲ့ ဘောင်မဝင်တော့ဘူးလို့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်စေပြန်ပါတယ်။
ဒီတော့ Virgin ဆိုတဲ့ စကားကို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ရမှာ မည်သည့်အချက်ကို အတည်ပြုရမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ မပြောနိုင်သေးသော်လည်း နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ဆေးပညာနဲ့နှီးနွယ်တဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု သက်သေခံချက် သို့မဟုတ် အပျိုစစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်တွေဟာ အလွန်အရေးပါလာပါတယ်။
အခု အမျိုးသမီးတစ်ဦးကတော့ မင်္ဂလာဦးညမှာ သတို့သားအသစ်စက်စက်နဲ့ ချစ်တင်းနှောစဉ် သွေးမထွက်လို့ဆိုပြီး သတို့သားအသစ်စက်စက်က သူမကို အပျိုမစစ်ဘူး စွပ်စွဲခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ အမျိုးသားရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ အပျိုစစ်စစ်ဆိုရင် သွေးထွက်ရမယ်လို့ တရားသေ မှတ်ယူထားပုံရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးရဲ့ကိုယ်စား Ashraf Ariff အမည်ရ အမျိုးသားက တွစ်တာပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာပါ။ သူရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာ အမြင်ချင်းမတူတဲ့ သဘောထားတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တမ်း နစ်နာခဲ့ရသူကတော့ အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး၊ ဒီလို ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် သူမရဲ့ ဘဝအတွက် အမည်းစက် ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
Credit: နတ်စည်တော် (MyanmarNote)
← မျက်နှာခွဲစိတ်ပြီးမှ မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် ပိုလှလာတဲ့ နန်းခင်ဇေယျ
ဧရာဝတီဘဏ်ဝန်ထမ်းကို အုပ်စုဖွဲ့ ထိုးကြိတ်သည့် ကော့သောင်းမြို့မှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ CCTV ဗီဒီယိုဖိုင် ၂ ခု ပျံ့ နှံ့ နေ →
ကလေးငယ်ကိုချုပ်ကာ ရင်ဘတ်ပေါ်တက်တူးထိုးပေးနေတဲ့ ဗီဒီယို ဝေဖန်ခံနေရ
October 15, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ကလေးငယ်ကိုချုပ်ကာ ရင်ဘတ်ပေါ်တက်တူးထိုးပေးနေတဲ့ ဗီဒီယို ဝေဖန်ခံနေရ
အားပါးတရရယ်လိုက်တာကြောင့် မေရိုးလွဲသွားတဲ့ အဒေါ်ကြီး
December 17, 2018 myanmarmagazine Comments Off on အားပါးတရရယ်လိုက်တာကြောင့် မေရိုးလွဲသွားတဲ့ အဒေါ်ကြီး
March 22, 2019 myanmarmagazine Comments Off on တင်ပါးနည်းနည်း အောင့်နေလို့ အွန်လိုင်းပေါ်က နတ်သားလေးဆိုတဲ့ အနှိပ်သည်ခေါ်နှိပ်လိုက်မိသူရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုး (ရုပ်သံ)